Indawo yokuphumla eIndiya eHimalayas yeVisa yoKhenketho lwaseIndiya
India Visa yaseMelika
I-India Visa yabemi base-Bhritane
I-India Visa yabemi baseCanada
I-India Visa yabemi base-Australia
I-India Visa yabemi baseFrance
Amanye amazwe »
Ushwankathelo loLwazi lwe-eVisa
Iimfuneko zeVisa zaseIndiya
Izidingo zeVisa zonyango zaseNdiya
Amachweba agunyazisiweyo okungena
Amachweba agunyazisiweyo aphumayo
Abahambi ngenqanawa yokuhamba
Iimfuno zeVisa ngePasipoti
I-Visa yeAllali yoNyango
Fumana iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi
Yintoni isicelo seIndiya yeVisa
Inkqubo yokufaka isicelo seVisa -
Abahambi beShishini beVisa
Iingcebiso zokuthintela ukwaliwa kweVisa
Iimfuno zeFoto yeVisa
Iimfuno zencwadana yokundwendwela yeVisa
Ukufaka isicelo seVisa evela e-USA
I-Visa yaseNdiya yabemi baseBritane
Ukufika kwisikhululo senqwelomoya
Amanqaku angakumbi »
I-Visa yabakhenkethi baseIndiya iyavula kwakhona
Uhlaziyo loMgaqo-nkqubo weVisa yaseIndiya
I-India kwi-Intanethi iVisa ebuyisiweyo
Ukutyelelwa kweendwendwe eIndiya
Uluhlu lwe-Indian Embasses
Abameli bamanye amazwe eIndiya
Umgaqo-nkqubo weVisa ye-OCI
Umgaqo-nkqubo weVisa kuBantwana
Umgaqo-nkqubo we-Visa we-COVID-19
Khetha ulwimiIsiNgesiFrenchisiJamaniItalianJapaneseSpanishNorwegianDanishDutchSwedishmenyezelisaFinnishIsiGrikeIsiRashiyaChinese (Simplified)ArabhuBulgarianCatalanChinese (Traditional)CroatianCzechbakwiiPhilippinesyesiHebhereHindiKoreanisiPhuthukesiIsiRomanianIndonesianLatvianisiLithuwaniyaisiSebhiyaSlovakaseSloveniaUkrainianVietnameseAlbanianEstoniaisiGalicianHungarianbaseMaltathaiOosaziwayoPersianisiBhuluMalaySwahiliIrishWelshIsiBhelarushiyenIcelandicMacedonianyiddishArmenianazerbaijaniIsiBasqueGeorgianngolu lwimiUrduBengaliBosniancebuanoEsperantoGujaratiHausanjuaIgboIsi-JavaneseKannadakhmerlaoisiLatiniXhosa MaoriMarathimongolianNepaliPunjabisomaliTamilteluguYorubaisiZuluIsiMyanmar (IsiBurma)yesiChichewaXhosa KazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmhariccorsicansisiFrisianwaiiNokusungula (Kirmanji)Xhosa ZuluisiLuksemboguisiPhashtoSamoaScottish gaelicshonasiSindhiisiXhosa
Impazamo yenzekile, nceda uzame kwakhona.
IHimalaya yindawo yokuhlala yaseYogis, iintaba eziphakamileyo kunye neyona ndawo iphakamileyo yokuphakama. Sigubungela iDharamsala, Leh, Assam, Darjeeling nase-Uttarkhand ye I-Visa yaseIndiya (eVisa India yabakhenkethi) abanini. Sinethemba lokuba uyonwabele iposti.
IiHimalaya eIndiya zihlala ziluhlobo oluhle lokubaleka ukusuka kwisantya sobomi ezantsi ezixekweni. NamaBritane xa ayelawula iIndiya ayedla ngokuya ezintabeni ngexesha leenyanga zasehlotyeni kweli lizwe xa lihlala lishushu. Namhlanje neenduli zayo ezinkulu, ezimi kufutshane INtaba Everest, eyona ndawo iphakamileyo ehlabathini, imilambo kunye neengxangxasi, uhlaza oluluhlaza, isibhakabhaka esiluhlaza, nomoya ococekileyo, iiHimalaya zinomtsalane omkhulu kubakhenkethi kungekuphela kumaIndiya kodwa nakubakhenkethi bamazwe aphesheya abeza apha ukuza kubona ubuhle bembonakalo ithi ilele esinqeni seentaba kwaye ubandakanyeke kwimisebenzi enjengokumisa inkampu, ukunyuka intaba, ukuhamba, iparagliding, ukuqengqeleka komlambo, ukuskiya ebusika, kunye nezinye izinto ezenzakalisayo. Olunye umtsalane lithuba lokuthatha iYoga yexesha elifutshane kunye nezifundo zokucamngca kwindawo ethe cwaka kwaye inoxolo. Ukuba ufuna ukutyelela iIndiya kunye neeholide kwiiHimalaya emva koko sikugubungele ngolu luhlu lweendawo ezintle onokuzityelela kwiiHimalaya.
Urhulumente waseIndiya wenze i-Visa yaseIndiya ngoku kwi-intanethi ekhulula abantu ukuba batyelele iiNdawo zokugcina zaseIndiya kwimisebenzi esemthethweni ye-Visa yaseIndiya. Ukuba uza eIndiya kuhambo lwezorhwebo, ngoko faka isicelo I-Visa yeshishini laseNdiya Kwi-Intanethi (iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya ngeShishini). Ngezizathu zezeMpilo zenza isicelo I-Visa yezonyango yaseIndiya Kwi-Intanethi (iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya ngezoNyango). Ukubona, ukhenketho, usapho lokuhlangana, abahlobo okanye injongo yeyoga ke faka isicelo I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya ekwi-Intanethi (IVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya yoMkhenkethi). Ukuba injongo yakho yokutyelela ukuza eNdiya kukohambo lweHimalayan, ke kuya kufuneka ufake isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) ngeenjongo zabakhenkethi (Indian Visa Online okanye eVisa India Tourism).
Iindawo zaseNdiya zokuNdwendwela kunye nezinto eziza kwenziwa
Ukuba unomdla kwiindawo ezininzi onokundwendwela eIndiya, emva koko siye sagubungela ezinye iindawo zokhenketho zabanikazi beVisa baseIndiya. Ezi ndawo ziquka Kerala, Oololiwe abakhulu, Indawo yabakhenkethi ephezulu kwiiNdawo ezi-5, India Yoga amaziko, Tamil Nadu, I-Andaman Nicobar Islands kwaye New Delhi.
Enye ye ezona zitishi zaziwayo phakathi kwabakhenkethi namhlanje, iMcleodganj ibekwe kwidolophu yaseDharamsala e-Himachal Pradesh. Baninzi kakhulu abantu baseTibet abazinza kule dolophana intle, iMcleodganj, ekwabizwa ngokuba yi-Little Lhasa okanye i-Dhasa eyindlela emfutshane yeDharamsala esetyenziswe ngabaseTibet, esi sikhululo senduli sidume ngokuba sisitha nje ngobuhle bayo kodwa nangokudumisa Ukubuyela ehlobo kwi-Bhritane ngaphambili kunye nokuba ikhaya lobungcwele bakhe i-Dalai Lama Ngubani inkokeli yokomoya yabantu baseTibetan, okwangoku. Inkcubeko kunye nomoya weyona ndawo intle uyolo lweTibetan kunye neBritane. Ezinye zeendawo ezidume kakhulu zokutyelela ngelixa ukwiholide eMcleodganj yiBhagsu Waterfall, iNamgyal Monastery, itempile yaseTibetan apho uDalai Lama kufanele ukuba ahlala khona, uhambo oluya e-Triund, naseDal Lake.
ILadakh iguqulela esiNgesini njengelizwe eliphakamileyo kwaye injalo, ijikelezwe njengeKarakoram kunye neHimalayan. Yenziwe kwizithili ze-Leh kunye neKargil kwaye i-Leh yenye yazo eyona ndawo idume kakhulu yabakhenkethi kwiiHimalaya. Abantu baya kwi-Leh ngee-monasteries zayo ezimangalisayo, imbonakalo yayo entle, kunye neemarike ezihle kakhulu. Xa usendleleni eya e-Leh Ladakh kufuneka uqiniseke ukuba undwendwela i-Pangong echibi elidumileyo nelithandekayo, elihlala lihlala ebusika; INtaba iMagnetic, eyaziwayo ngenxa yeempawu zayo zemagneti ezijongela phantsi umxhuzulane; I-Leh Palace, eyindawo eyakhiwe ngenkulungwane ye-17 ngexesha lolawulo lobukumkani baseNamgyal; kunye no-Tso Moriri apho uninzi lwakhona intaka ezinqabileyo zeHimalayan inokufumaneka.
I-Assam ayiyona eyaziwayo phakathi kwabakhenkethi kodwa yindawo entle entle ekufuneka uqiniseke ngayo ukuba uyandwendwela. Ngeehektare zamahlathi ezibandakanya ezinye zezona ntlobo zezityalo zicebileyo kweli lizwe, imilambo, amachaphaza emilambo, kunye nokutyalwa kweti kuyo yonke indawo, izele ziindawo ezintle kunye nezoyikisayo onokuhlala uzikhumbula. Ezinye zezi ndawo ekufuneka uqiniseke ngazo ukuba uyahamba uyokuzibona ngokobuqu yiKaziranga National Park, edume ngombhejane oneempondo, oyindawo ye-UNESCO yeLifa leLifa leMveli, kunye nelinye leenzame ezibe yimpumelelo ukugcinwa kwezilwanyana zasendle eIndiya; IMajuli, esisisiqithi esicocekileyo samanzi kunye nekhaya le-Assam 'Mising' okanye 'Mishing' isizwe esinenkcubeko egxunyekwe yonke indawo; IHajo, indawo yokundwendwela yamaHindu, amaSilamsi, kunye namaBhuda aneendawo zayo ezingcwele zonqulo zontathu; kunye neSilchar kwiindonga zeSurma okanye iBarak River, eyenye ye Ezona ndawo zintle eAssam.
Yaziwa ngokuba Ukumkanikazi weHimalaya, I-Darjeeling yenye yezona ndawo zibalaseleyo kunye ne-mesmerizing e-India. Uluhlaza lwayo oluhlaza kunye neembono zepanoram zinika ubuhle obunobuqaqawuli obungenakulinganiswa nasiphi na isikhululo seenduli. Idume ngamasimi etiyi adumileyo kunye neegadi zeti, le dolophu ikwabizwa ngokuba yiToy Train yayo, eyiNdawo yeLifa leMveli le-UNESCO, ukutya kwaseTibetan, kunye nezakhiwo ezibonisa uyilo lobukoloniyali. Xa undwendwela iDarjeeling kufuneka uqiniseke ukuba uthatha uhambo kwiDarjeeling Himalayan Railway okanye iTreyini yoToyi; Ndwendwela iTiger Hill apho ungabona khona ukutshona kwelanga okuphefumlayo kwaye ubone iKanchenjunga, intaba yesithathu ephezulu emhlabeni; mhlawumbi ufunde ukunyuka intaba kwiZiko leNtaba yeHimalaya; kunye neNightingale Park efanelekileyo ukonwabela ubuhle beDarjeeling kunye nemozulu epholileyo.
A indawo ethandwayo yohambo, eli lizwe likulungele neholide. Ngumthi wayo omde, iintyatyambo ezintle, iintaba ezigqunywe likhephu, kunye nesibhakabhaka esiluhlaza, ngathi ngumzobo we-idyll. Ukuba undwendwela i-Uttarakhand, kufuneka uqiniseke ukuba uya e-Nainital, sisikhululo seenqwelomoya esidumileyo esidume ngokuba namachibi aso, ngakumbi i-Naini Lake; IRishikesh, eyaziwa njenge Yoga Inkulumbuso yeHlabathi nalapho unokundwendwela iindawo ezinomdla njenge IiBeatles Ashram, Eli liziko leYoga elalikhe latyelelwa ngamaBeatles ukuze lifunde ngokufanayo; kunye neMussoorie, ekwayenye yezona ndawo zidumileyo zaseIndiya.
Ukuba ungumhlali kwaye ungummi wase eunited States, Khanada, Fransi , Nyu Zilend, Ostreliya, Jemani , Swiden, Dominikha, Swizalend, ElamaTaliyane, Singapho , iunited Kingdom, uvumelekile kwaye uyifumana inomdla wokuthatha kwiiHimalayan Heights. Ngaphezulu kwamazwe ayi-180 afanelwe Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) ngokwe Indian Visa Ukufaneleka kwaye usebenzise iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi ebonelelwa yi Urhulumente waseIndiya.
Ukuba ucwangcisa ukutyelela i-India, unokufaka isicelo se Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India), indawo ebonelelwe yi Urhulumente waseIndiya, ngokusebenzisa le webhusayithi, kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhakamshele IZiko loNxibelelwano laseVisa laseIndiya ngenkxaso kunye nesikhokelo.
Ulwazi lwakho lobuqu lufihlwe ngokukhuselekileyo yiSecurity Sockets Layer (SSL) software
IFOMU YOKUFAKA ISICELO
I-eVISA INDIA YOLWAZI
AMAZWE e-eVISA ELIGIBILE
I-VISA yokuqala ye-EMEDICAL
I-eVISA VISITOR YOLWAZI
IIMFUNO ZOKUFUNDA I-eVISA
IIPESI ZEXESHA ELIYENZIWEYO
IIPHAKHA ZESIQINISEKISO SESIPHUMO
IMIHLA YOKUGQIBELA EBANGELAYO
I-URGENT INDIAN VISA
AMACEBISO OKUVULA UKUVUNYWA KWE-VISA
IINGCALI ZOKUVUSA I-VISA
INKQUBO YESICELO SE-EVISA
QAPHELA INDIA eVISA
UKUFAKA ISICELO SE-EVISA EUSA USA
IZIKHUMBUZO ZABADALA ZASE-INDIA
IBANDHARVGARH IPAKI YESIZWE
ILIZWE ILIZWE KERALA
UKUTYA OKUQHELEKILEYO KWAMANDIYA
KUFUNEKA UBONE IINDAWO ZELIFA LEMVELI LE-UNESCO
IMIDANISO YABANTU YASENDIYA EYODUMILEYO
IIlekese EZIDUMILEYO ZASENDIYA
UKUHLAZIYA UTAJ MAHAL
QHALASELA ISIKHOKELO ESIYA KUGoA
ISIKHOKELO SESIKOLO SE-MUMBAI
YIBONAKALisile INTSAPHO NADU
I-RAN YOKUTSHALWA KWENTLANGO EMHLOPHE
IANDAMAN NENICOBAR ISLANDS
ISIKHOKELO KUBAKHENKETHO EMEGHALAYA
KUFUNEKA UBONELE UMZANTSI INDIYA
INGXAKI ZOKUHLAWULA INTLAWULO
Ilungelo lokushicilela ngu- www.india-visa-online.com
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: iVisa yaseIndiya ekhutshwe yile webhusayithi yentengiso isetyenziswa ngokuthe ngqo kwi-Ofisi kaRhulumente wase-India yoFambo. Urhulumente wase-India akonyulanga i-www.india-visa-online.com ngqo, ngokungathanga ngqo okanye ngokukodwa. Intlawulo yobungcali ihlawuliswa ngeenkonzo zethu kunye neRhafu yeRhafu kaRhulumente kwabo bafaka izicelo kule webhusayithi.